आर्थिक क्रान्ति पक्का | गृहपृष्ठ
Home १० वर्ष अघि आर्थिक क्रान्ति पक्का
अन्ततः यो देशमा आर्थिक क्रान्ति भएर नै छाड्ने भयो । अरू आउरेबाउरे दल वा अर्थशास्त्रीहरूले यो कुरा भनेका भए पत्याइन्नथ्यो । तर विश्व इतिहासमै महान् राजनीतिक क्रान्ति गर्न सफल नेकपा माओवादी–वाइसीएलवादीले भनेपछि नपत्याई धरै छैन ।
त्यसमाथि उनीहरूले आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व आफूले नभई निजी क्षेत्रलाई गर्न दिने भनेका छन् । जब निजीक्षेत्रले नै त्यस्तो क्रान्तिको नेतृत्व गर्न पाउँछ त्यहाँ क्रान्ति सफल नहुने कल्पना नै गर्न मिल्दैन ।
केही दिनयता देखिन थालेका निजीक्षेत्रका गतिविधिबाट आर्थिक क्रान्तिका केही प्रारम्भिक झलकहरू देखिन पनि थालेका छन् । निजी क्षेका नेताहरू कहिले नयाँ बजारस्थित प्रचण्ड प्यालेस धाएर त कहिले पाँचतारे होटलमा बोलाएर नेकपा माओवादी वाइसीएलवादीका मालिकहरूलाई रिझाउन व्यग्र छन् । आर्थिक क्रान्ति भएरै छाड्ने यो स्पष्ट संकेत हो । तर आर्थिक क्रान्ति कसको ? जनताको कि साहुजीवर्ग र माओवादी वाइसीएलवादीको ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन चाहिँ बाँकी नै छ ।
यसमा सबैभन्दा आशा लाग्दो पक्ष के हो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विदेशी स्वदेशी लगानीको ‘फ्युजन’ गर्ने भनेका छन् । अर्थात् नेपालमा खासगरी भारतीयहरूबाट मात्रै त्यो पनि आईसीमा मात्र लगानी भइरहेको छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको पेगिङ गर्ने विद्यमान प्रावधानलाई हटाई अब डलर र नेपाली रुपैयाँको फ्युजन अर्थात् सम्मिश्रण गरे डलरुपैयाँ बनाइनेछ । डलरुपैयाँको लगानीबाट चामत्कारिक परिणामको अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तो लगानीमार्फत नेपालमा हाइब्रिड अर्थात् विकासे खालको आर्थिक क्रान्ति हुनेमा विश्वास गर्न करै लाग्छ । त्यस्तै माओवादीले निजी लगानी पनि अपेक्षा गरेको छ । त्यस नीतिअन्तर्गत माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले हिजो विभिन्न उद्योग तथा सर्वसाधारणबाट उठाएको वा लुटेको रकम उद्योगमा वा सेयर बजारमा लगानी गर्नेछन् । यसबाट माओवादीहरू देशमा लगानी गर्ने पुँजीको अभाव नहुनेमा ढुक्क छन् ।
त्यस्तै स्वदेशी पुँजी पलायन हुन नदिन माओवादीले हिजो सीताराम प्रसाईंलाई पक्डेजस्तै अब पुँजीको पछाडि लाग्ने कुरा कमरेड हिसिला यमीले बताएकी छिन् ।
७ माघ २०७५, सोमबार ०६:०४